Wararka Maanta: Talaado, Jun 12, 2012-Maamulka Ahlusunna oo Suxufiyiin u xiran ku Eedeeyay inay galeen dambiyo shaqsi ah ayna Maxkamad horgeynayaan
Suxufiyiinta la xiray oo laba ahaa ayaa waxay kala ahaayeen: Cabdi-jamaal Macallin
Axmed iyo Bashiir Maxamed Salaad oo u kala shaqeynayay idaacadaha Dalsan ee ka howlgasha Muqdisho iyo idaacadda Bar-kulan oo ka howlgasha Nairobi.
Guddoomiye ku xigeenka Dhuuso-mareeb ee maamulka Ahlusunna, Farxaan Macallin Cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in labadan wariye ay ku haystaan dambi ay si shaqsi ah uga galeen maamulka, balse aysan ku haysan war ay idaacado ka baahiyeen.
"Bashiir Sanka iyo Cabdi-jamaal Macallin waxay si qadaf cad kula kaceen maamulka Ahlusunna ee degmada Dhuusomareeb, iyagoo meel faraage ah ka sheegay inuusan maamul ka jirin degmada. Kumana haysanno warar ay warbaahinta ay sii-daayeen," ayuu yiri Farxaan Macallin.
Sidoo kale, guddoomiye ku xigeenka maamulka Dhuuso-mareeb wuxuu sheegay in wariye kale oo ku sugan degmadaas ay u haystaan dambiyo ku aaddan warar been ah oo uu maamulka ka faafiyay ayna maxkamad uga yeeri doonaan.
Ugu dambeyn, mas'uulka u hadlay Ahlusunna ayaa sheegay in labada wariye ee u xiran midkood uu ku hanjabay magac beeleed, taasna ay qayb ka tahay dambiyada ay u haystaan wariyeyaashan.
Soomaaliya ayaa lagu sheegaa inay tahay meesha ugu khatarta badan Adduunka ee ay suxufiyiintu ka shaqeeyaan, iyadoo sannadkan lagu dilay Soomaaliya lix wariye oo saddex ka mid ah lagu dilay Muqdisho.